कलाकार इकुको आश्रममा पुग्दा बिजोग देखियो,१४ जना बच्चालाई के खुवाउने ? इकु ऋणमा डुबे (भिडियो हेर्नुस) – Classic Khabar
कलाकार इकुको आश्रममा पुग्दा बिजोग देखियो,१४ जना बच्चालाई के खुवाउने ? इकु ऋणमा डुबे (भिडियो हेर्नुस)
June 7, 2021 235
आफ्नो लागि जिन्दगी त जो पनि बांच्छ, अरुको लागि बांच्न सके मात्रै जिन्दगी सार्थक हुन्छ । हास्य कलाकार सुलेमान शंकर इकु पनि यहि सोच्छन् अनि उनले जिन्दगी त्यसैगरी चलाएका छन् । मुलपानीमा रहेको इकुको यो सुन्दर घर, अनि घरको नाम, स्नेह आश्रम । स्नेह आश्रम, जहां दर्जनौं नानी बाबुहरुको भविष्य फुल्दैछ । दर्शकबृन्द, घर परिवार बिहिन, आमा बुवा बिहिन र बिभिन्न समस्याले परिवारबाट टाढा रहेका बाल बालिकाहरुलाई इकुले बुवाको भुमिका निभाउंदै यो पुण्य काम गर्दै आएको ६ बर्ष बितिसक्यो ।
इक्ुको यो कामलाई हाम्रो पनि सम्मान । कलाकारिताबाट आएको पैसाले हालसम्म यि नानी बाबुहरुको रेख देख गरिरहेका छन् । बासस्थान, खाना, कपडा, शिक्षाका लागि इकु एक्लैले यो काम गर्न गाह्रो पनि भैरहेको उनले बताए । यदि सबै नेपालीको साथ र सहयोग भैदिए । नानी बाबुहरुले मिठो खान पाउंथे अनि राम्रो स्कुलमा पढ्न पाउंथे । इकु सबै मांझ सहयोगका लागि अनुरोध गर्दछन् । लकडाउनको यो समयमा शिशिर भण्डाी इकुको आश्रममा सहयोग लिएर पुग्दा इकुले आफ्नो समस्याहरु बताए । १४ जना नानीहरुलाई पाल्नलाई इकुलाई गाह्रो छ । आफुले बिभिन्न कार्यक्रमहरुबाट कमाएको पैसाले नपुगेर इकुले ऋण लिएका छन् । इकु भन्छन्, नानी बाबुहरुको लागि घर बनाउन नसक्ने भएँ । भिडियो हेर्नुस
Prevराजा महेन्द्रलाई ज्योतिषीले भने – ‘बालकको कुण्डलीमा ३ पटक राजा हुने योग छ’
Nextदेउता बनेर पुगे मुसहर बस्तीमा धुर्मुस–सुन्तली, पाए ७० परिवारले एक महिनाको खाद्यान्न
साबधान! निको भएका बिरामीमा फेरी देखिन थाल्यो पोस्ट कोभिड, देखिन थाले यस्ता जटिल समस्या
तेस्रो धारका नेताहरूलाई ओली पक्षले भन्यो – पार्टीमा अब बार्गेनिङ चल्दैन
बिनयको प्रेमिका पुजाले खुलाईन बिनयको मोबाइलमा सपनाको गो,प्य फोटो कसले हालिदियो सुनेर सब छ्क्क (भिडियो सहित)